【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】သညျးခွကြေောကျတညျခွငျး (Gallstones) | Opinion Leaders
လူတှရေဲ့ စားသောကျနထေိုငျမှုပုံစံ ပွောငျးလဲလာခွငျးက အခြို့သော ရောဂါတှကေို ပိုဖွဈလာစတေယျ။ အဆီမြားတဲ့ အစားအသောကျတှေ ဆီကွျောတှေ အသငျ့စား fast foods တှေ ဒီအစားအသောကျတှေ အစားမြားလာတာနဲ့ သညျးခွကြေောကျ (Gall stones) အဖွဈမြားလာကွတယျ။
သညျးခွကြေောကျတညျခွငျးဆိုတာ သညျးခွအေိတျ (Gall bladder) လို့ချေါတဲ့ အသညျးအောကျနားလေးမှာရှိတဲ့ အစိတျအပိုငျးလေးမှာ ကြောကျတညျခွငျးကိုချေါတာပါ။ ဒီအစိတျအပိုငျးလေးက အစာခဖြေကျြခွငျးမှာ ပါတဲ့ သညျးခွရေညျ (bile) ကို သိုလှောငျထားပွီး အစာစားလိုကျတဲ့အခါ အူသိမျထဲသို့ ထုတျပေးတာပါ။ ဒီအစာခရြေညျ (bile) ထဲမှာ cholesterol လို့ချေါတဲ့ အဆီတှမြေားနလေို့ဖွဈစေ၊ bilirubin လို့ချေါတဲ့ ရောငျခွယျပစ်စညျး တမြိုးမြားနရေငျဖွဈစေ၊ သညျးခွအေိတျ ကောငျးကောငျးအလုပျမလုပျခွငျးကွောငျ့ဖွဈစေ အနညျထိုငျပွီး သညျးခွကြေောကျဖွဈရတာပါ။
(၁)Cholesterol Gall Stones
(၂)Pigment Gall Stones
ဒီအခကျြတှကေ သညျးခွကြေောကျတညျခွငျးကို ပိုဖွဈစပေါတယျ-
-စားသောကျနထေိုငျမှုပုံစံ (အဆီ အစားမြားပီး fibre အသီးအရှကျ အစားနညျးသူမြား)
-မိသားစုထဲမှာ သညျးခွကြေောကျ ရှိသူမြား
- သှေးရောဂါရှိသူမြား (Sickle cell disease, Leukemia သှေးကငျဆာ)
-အီစထရိုဂငျြ ပါဝငျသော သန်ဓတေားဆေးမြားနှငျ့ ဟျောမုနျးဆေး သုံးစှဲရသူမြား
ဘယျလို ရောဂါ လက်ခဏာတှနေဲ့ လာတတျပါသလဲ?
မြားသောအားဖွငျ့ သညျးခွအေိတျထဲမှာ ကြောကျရှိရုံနဲ့ ဘာရောဂါ လက်ခဏာမှ မပွတတျပါဘူး။ တခါတရံ ဝမျးဗိုကျအာထရာဆောငျး ရိုကျရငျးနဲ့ အမှတျမထငျ တှရေ့တတျပါတယျ။ ဒီကြောကျတှကေ သညျးခွလေမျးကွောငျး တလြှောကျမှာရှိတဲ့ ပွှနျတှမှော ပိတျမိရငျတော့ ဒီလက်ခဏာတှနေဲ့ တှရေ့မှာပါ။
-ရငျညှနျ့တဝိုကျ (Epigastrium) နရော သို့မဟုတျ ဗိုကျအပျေါပိုငျး ညာဘကျနရောတှငျ အောငျ့ခွငျး
-ထိုမှတဆငျ့ နောကျကြောဘကျ လကျပွငျရိုးနှဈခုကွား နရောအထိပါ အောငျ့ခွငျး
သညျးခွကြေောကျပိတျတဲ့ နရောပျေါမူတညျပွီး ဒီနောကျဆကျတှဲ ဆိုးကြိုးတှဖွေဈလာနိုငျပါတယျ။
-သညျးခွအေိတျ ရောငျရမျးခွငျး (Cholecystitis)
-သညျးခွအေိတျ အရညျတညျခွငျး (mucocele)၊ ပွညျတညျခွငျး (empyema gall bladder)
-သညျးခွပွှေနျမကွီး ပိတျခွငျး (Cholidocholithiasis)
- အူပိတျခွငျး (Gall stone ileus)
ဒီလို သညျးခွကြေောကျက သညျးခွလေမျးကွောငျးတလြောကျ ပိတျမိရငျတော့ အဖြားရှိခွငျး အသားဝါခွငျး သှေးဆိပျတကျခွငျး စတဲ့အခွားလက်ခဏာတှပေါ တှရေ့မှာပါ။
ဝမျးဗိုကျအာထရာဆောငျးရိုကျခွငျးဖွငျ့ သညျးခွအေိတျအတှငျး ကြောကျရှိခွငျးကို တှနေို့ငျပါ တယျ။ သညျးခွကြေောကျ သညျးခွလေမျးကွောငျးမှာ ပိတျမပိတျနဲ့ အခွားနောကျဆကျတှဲ ဆိုးကြိုးတှအေတှကျကတော့ ဝမျးဗိုကျ CT ရိုကျခွငျး MRCP လို့ချေါတဲ့ MRI ဖွငျ့ သညျးခွေ လမျးကွောငျးတလြောကျ စဈဆေးခွငျး Endoscopic USG လို့ချေါတဲ့ မှနျပွောငျးဖွငျ့ အာထရာဆောငျးရိုကျခွငျးဖွငျ့ သိနိုငျပါတယျ။
သညျးခွကြေောကျတှကေ ဘာရောဂါလက်ခဏာမှ မပွရငျ ကုစရာမလိုပါဘူး။ သညျးခွအေိတျအတှငျးက ကြောကျတှကေိုတော့ သညျးခွအေိတျထုတျပဈခွငျးဖွငျ့ ကုသနိုငျပါတယျ။
ဒီအပတ်မှာတော့ သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်း (Gall Stones) အကြောင်း ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတအဖြစ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လူတွေရဲ့ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲလာခြင်းက အချို့သော ရောဂါတွေကို ပိုဖြစ်လာစေတယ်။ အဆီများတဲ့ အစားအသောက်တွေ ဆီကြော်တွေ အသင့်စား fast foods တွေ ဒီအစားအသောက်တွေ အစားများလာတာနဲ့ သည်းခြေကျောက် (Gall stones) အဖြစ်များလာကြတယ်။
သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်းဆိုတာ သည်းခြေအိတ် (Gall bladder) လို့ခေါ်တဲ့ အသည်းအောက်နားလေးမှာရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးမှာ ကျောက်တည်ခြင်းကိုခေါ်တာပါ။ ဒီအစိတ်အပိုင်းလေးက အစာချေဖျက်ခြင်းမှာ ပါတဲ့ သည်းခြေရည် (bile) ကို သိုလှောင်ထားပြီး အစာစားလိုက်တဲ့အခါ အူသိမ်ထဲသို့ ထုတ်ပေးတာပါ။ ဒီအစာချေရည် (bile) ထဲမှာ cholesterol လို့ခေါ်တဲ့ အဆီတွေများနေလို့ဖြစ်စေ၊ bilirubin လို့ခေါ်တဲ့ ရောင်ခြယ်ပစ္စည်း တမျိုးများနေရင်ဖြစ်စေ၊ သည်းခြေအိတ် ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ အနည်ထိုင်ပြီး သည်းခြေကျောက်ဖြစ်ရတာပါ။
ဒီအချက်တွေက သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်းကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်-
-စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံ (အဆီ အစားများပီး fibre အသီးအရွက် အစားနည်းသူများ)
-မိသားစုထဲမှာ သည်းခြေကျောက် ရှိသူများ
- သွေးရောဂါရှိသူများ (Sickle cell disease, Leukemia သွေးကင်ဆာ)
-အီစထရိုဂျင် ပါဝင်သော သန္ဓေတားဆေးများနှင့် ဟော်မုန်းဆေး သုံးစွဲရသူများ
ဘယ်လို ရောဂါ လက္ခဏာတွေနဲ့ လာတတ်ပါသလဲ?
များသောအားဖြင့် သည်းခြေအိတ်ထဲမှာ ကျောက်ရှိရုံနဲ့ ဘာရောဂါ လက္ခဏာမှ မပြတတ်ပါဘူး။ တခါတရံ ဝမ်းဗိုက်အာထရာဆောင်း ရိုက်ရင်းနဲ့ အမှတ်မထင် တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီကျောက်တွေက သည်းခြေလမ်းကြောင်း တလျှောက်မှာရှိတဲ့ ပြွန်တွေမှာ ပိတ်မိရင်တော့ ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့ တွေ့ရမှာပါ။
-ရင်ညွန့်တဝိုက် (Epigastrium) နေရာ သို့မဟုတ် ဗိုက်အပေါ်ပိုင်း ညာဘက်နေရာတွင် အောင့်ခြင်း
-ထိုမှတဆင့် နောက်ကျောဘက် လက်ပြင်ရိုးနှစ်ခုကြား နေရာအထိပါ အောင့်ခြင်း
သည်းခြေကျောက်ပိတ်တဲ့ နေရာပေါ်မူတည်ပြီး ဒီနောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
-သည်းခြေအိတ် ရောင်ရမ်းခြင်း (Cholecystitis)
-သည်းခြေအိတ် အရည်တည်ခြင်း (mucocele)၊ ပြည်တည်ခြင်း (empyema gall bladder)
-သည်းခြေပြွန်မကြီး ပိတ်ခြင်း (Cholidocholithiasis)
- အူပိတ်ခြင်း (Gall stone ileus)
ဒီလို သည်းခြေကျောက်က သည်းခြေလမ်းကြောင်းတလျောက် ပိတ်မိရင်တော့ အဖျားရှိခြင်း အသားဝါခြင်း သွေးဆိပ်တက်ခြင်း စတဲ့အခြားလက္ခဏာတွေပါ တွေ့ရမှာပါ။
ဝမ်းဗိုက်အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်းဖြင့် သည်းခြေအိတ်အတွင်း ကျောက်ရှိခြင်းကို တွေ့နိုင်ပါ တယ်။ သည်းခြေကျောက် သည်းခြေလမ်းကြောင်းမှာ ပိတ်မပိတ်နဲ့ အခြားနောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေအတွက်ကတော့ ဝမ်းဗိုက် CT ရိုက်ခြင်း MRCP လို့ခေါ်တဲ့ MRI ဖြင့် သည်းခြေ လမ်းကြောင်းတလျောက် စစ်ဆေးခြင်း Endoscopic USG လို့ခေါ်တဲ့ မှန်ပြောင်းဖြင့် အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။
သည်းခြေကျောက်တွေက ဘာရောဂါလက္ခဏာမှ မပြရင် ကုစရာမလိုပါဘူး။ သည်းခြေအိတ်အတွင်းက ကျောက်တွေကိုတော့ သည်းခြေအိတ်ထုတ်ပစ်ခြင်းဖြင့် ကုသနိုင်ပါတယ်။